Natao ho ampiasain’ny tafika amerikana izy ireo ary tena matanjaka sy tsotra ary tsy misy takelam-by ao anatiny. Tonga lafatra amin’ny asantsika izay tena ilana sterilization azo antoka. Azo entina mora foana izy ireo miaraka amin’ny tendrony mivalona midina mba hametrahana fijoroana. Miasa amin’ny herinaratra tokana sy telo izy ireo. Mametraka eo alohan’izy ireo izy ireo ary 112lts ny habeny miaraka amin’ny safidy talantalana maro.
Izy ireo dia manadio sy manamaina fonosana, fitaovana, fitaovana, vera, fonon-tànana, syringes, vilany fandriana ary ranon-javatra.
Ny dingana tsirairay amin’ny tsingerina mandroritra — faneriterena, fanalefahana ary fantsom-baravarana dia atomboka amin’ny tanana amin’ny alàlan’ny kodiarana fandefasana miasa amin’ny valizy misy seranana maromaro. Ny kodiarana fandaharana dia manana mari-pamantarana fehezanteny. Ny dialy rehetra sy ny fanaraha-maso mifandraika dia miorina amin’ny toerana mora vakiana. Ny timer dia hita eo ambanin’ny fefy varavarana.
Nanolotra vaovao ho an’ny hopitaly UK Disaster Relief izahay ary maro an’isa mialoha ho an’ny fikambanana mpanao asa soa maro karazana sy ONG manerantany. Nisy hopitaly lehibe tokoa nitondra azy ireo ho an’ny mpanohana ary izy ireo ihany no steriliser ao amin’ny hopitaly.
Ampidino ny Brochure
“Raha tsy izany, raha miasa any amin'ny faritra ambanivohitra ianao izay tsy misy herinaratra azo itokisana. Topazo maso ny Ecoclave anay . Mampiasa hazo tena mandaitra ity autoclave ity ary valiny revolisionera ho an'ity olana ity ”